Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ လင့်များ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ လင့်များ
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် ကျမအမေ အသက် ၆၄ပါ။ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်၊ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါတွေ ရှိပါတယ်ရှင့်။ လွန်ခဲ့သော ၈လခန့်က ဘယ်လက်၊ဘယ်ခြေ၊ ၂ဖက်လုံးကျိုးထားပါတယ်။ ၈.၇.၁၇ မှစ၍ ဘယ်ဘက်အခြမ်း တဖြည်းဖြည်း လေးလာပါသည်။၁၂.၇.၁၇ တွင်ဆေးခန်းပြပါသည်။ညာဘက် နားရွက်အပေါ်တွင် သွေးခဲ၍ ဆေး ၅ရက် ထိုးပေးပါသည်။ ၁၉.၇.၁၇ တွင် ခေါင်းဓာတ်မှန်ရိုက်ပါသည်။ ခဲနေသည့်သွေးကြောများ သေးသေးလေးတွေ ပျံ့နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ ဘယ်ဘက်အခြမ်းကိုလည်း ကူးချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ အဲဒီ့ရောဂါဟာ လေဖြတ်တာလားဆိုတာသိချင်လို့ပါရှင့်။ ပြန်ကောင်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိပါသလားရှင့်။ လူနာ စကားကောင်းကောင်း ပြောနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
မေးခွန်းပါရောဂါတွေအားလုံးစာတွေ ခဏခဏတင်ထားတယ်။ ဘလော့မှာလည်းဖတ်နိုင်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ဘလော့မရှာတတ်လို့ပါ။ အခြားရောဂါများ ဘလော့တွင်ဖတ်လို့ရပါပြီရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
လေဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တာ ရှာမရပါရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘလော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ရေးပေးပါရှင့်။
1. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/stroke.html
2. Stroke Emergency Treatment ဆထုပ် အရေးပေါ်ကုသခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/stroke-emergency-treatment.html
3. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောမတော်တဆဖြစ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stroke_22.html
4. Stroke Treatments ဆထုပ် ကုသနည်းများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/stroke-treatments.html
5. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြော ဖောင်းပြီးပေါက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/stroke.html